साउन १ देखि कस्ता मोबाइल चल्दैनन् ? - Abhiyan news
३१ असार २०७८, बिहीबार १५:२० अभियान न्यूजLeaveaComment on साउन १ देखि कस्ता मोबाइल चल्दैनन् ?
काठमाडौं : शुक्रबारबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्दैछ । विदेशबाट मोबाइलको चोरी पैठारी रोक्न एवं हराएको मोबाइल सजिलै पत्ता लगाउन सहयोगी मानिएको यो सिस्टम सबै खालका मोबाइलमा अनिवार्य गरिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालमै मोबाइल पसलबाट भ्याट तिरेर किनेको मोबाइलमा आईएमईआई पहिले नै दर्ता भएको हुन्छ । उपहार स्वरुप पाएको मोबाइल वा भन्सारको सिस्टमबाहिरबाट ल्याएको मोबाइलमा रहेको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणको सिस्टममा जोडिएको हुँदैन । त्यस्ता मोबाइल सिस्टममा नजोडिँदा जुनसुकै बेला पनि बन्द हुन सक्ने भएकोले छिट्टै मोबाइललाई सिस्टममा जोड्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । आफ्नो मोबाइलकोआइएमइआई थाहा पाउन *#06# डायल गर्ने र दर्ता गरे/नगरेको https://eir.nta.gov.np/मा हेर्न सकिन्छ ।
९ भाद्र २०७८, बुधबार ००:३१ अभियान न्यूज
एनसेल र भायानेटको सहकार्यमा बिहीवार घोषणा हुन लागेको विशेष अफर के छ ?
८ भाद्र २०७८, मंगलवार १२:३० अभियान न्यूज